‘हाई’ लाग्नुको रोचक कारण ! - Aamsanchar
‘हाई’ लाग्नुको रोचक कारण !
आमसंचार ,भदौ २१, २०७८
अर्को चोटि कुनै जमघटमा एउटा सानो प्रयोग गर्नुहोला । मुख खोलेर ठुलो हाई गर्नुहोला । त्यसपछि तपाईंसँगै अरू कति जनाले हाई गर्छन् याद गर्नुहोला । त्यहाँ अरूले पनि तपाईंजस्तै हाई गर्ने सम्भावना प्रबल हुन्छ । यो लेख पढ्दै गर्दा तपाईंले पनि कम्तीमा एक पटक त पक्कै हाई गर्नै हुनेछ । तर, तपाईंलाई हाई अल्छी लागेर भने पक्कै आउने होइन । बरु हाईको बारेमा पढेर नै तपाईंलाई ‘हाई’ आउनेछ जसरी अरूलाई हाई गरेको देखेर वा सुनेर आउँछ ।
अब प्रश्न आउँछ हाईको यो अनौठो सङ्क्रमण आखिर कसरी हुन्छ तर, त्योभन्दा पहिले ‘हाई’ नै के हो भन्ने बारेमा बुझौँ । हाई भनेको हाम्रो नियन्त्रणमा नभएको शरीरको एउटा क्रिया हो । यसमा हामी ठुलो मुख खोल्छौँ र लामो श्वास लिन्छौँ । यो हाम्रो नियन्त्रणमा छैन किनभने हामी जन्मनुभन्दा पनि पहिले नै हाई गर्न सुरु गरिसकेका हुन्छौँ । बाल्टिमोर काउन्टीमा रहेको युनिभर्सिटी अफ मेरिल्याण्डका न्यूरोसम्बन्धी वैज्ञानिक रोबर्ट प्रोभिनले गरेको एक अध्ययनमा आमाको पेटमा रहेको ११ हप्ताको शिशुले पनि हाई गरेको पाइएको थियो । हाईलाई आराम र निद्रासँग जोडिए पनि हाई गर्दा तपाईंको मुटुको चाल ३० प्रतिशतसम्म बढ्ने गर्दछ । यो तपाईं उत्तेजित हुनुसँग पनि सम्बन्धित रहेको छ ।
– शारीरिक सिद्धान्त
यो सिद्धान्तअनुसार हाम्रो शरीरले थप अक्सिजन लिन वा शरीरमा जम्मा भएको अतिरिक्त कार्बोन डायोअक्साइडलाई फाल्न हाई गर्दछ । यसले हामी ठुलो समूहमा रहँदा किन पालैपालो हाई गर्छौं भन्ने कुरालाई पनि व्याख्या गर्दछ । किनभने ठुलो समूहले धेरै कार्बोन डायोअक्साइड निर्माण गर्दछ । जसको अर्थ हाम्रो शरीरले थप अक्सिजन लिन र अतिरिक्त कार्बोन डायोअक्साइडलाई फाल्न प्रतिक्रिया जनाउँछ । तर, यदि अक्सिजन बढी लिनकै लागि हामीले हाई गर्छौं भन्ने हो भने व्यायाम गर्दा चाहिँ हामी किन हाई गर्दिनौँ त रु रोबर्ट प्रोभिनले यस सिद्धान्तको बारेमा पनि परीक्षण गरेका छन् । मानिसहरूलाई थप अक्सिजन दिँदैमा हाई आउन कम भएन । त्यस्तै, मानिस बसेको वातावरणमा कार्बोन डायोअक्साइडको मात्रा कम गर्दा पनि हाई रोकिएन ।
– विकासको सिद्धान्त
– अल्छीको सिद्धान्त
– मस्तिष्क सेलाउने सिद्धान्त
यो चाहिँ सबैभन्दा नयाँ सिद्धान्त हो । अध्ययनकर्ताहरूका अनुसार हाम्रो मस्तिष्क तातेको अवस्थामा मानिसहरू हाई गर्छन् । हाई गर्नु भनेको मस्तिष्कले आफूलाई सेलाउने प्रक्रिया भएको उनीहरूको भनाइ छ । के हाम्रो मस्तिष्क तातो वा चिसो हुँदा केही फरक पर्छ ? उनीहरू भन्छन् – चिसो मस्तिष्कले हामीले स्पष्टसँग सोच्न मद्दत गर्छ । त्यसैले हाई हामीलाई सचेत बनाउनका लागि विकास भएको हुनसक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
ल अब भन्नुहोस् त, यो लेख पढिसक्दा तपाईंलाई चाहिँ कति पटक हाई आयो रु आशा गरौँ धेरै चाहिँ आएन होला ।
September 06, 2021 01:05 AM
आजको राशिफल ( २१ भाद्र २०७८ सोमवार )
September 06, 2021 00:25 AM
प्रदेश १ सरकारको बैठक सम्पन्न, यस्ता छन् निर्णय
September 05, 2021 12:57 PM
मेचीनगरका उपेन्द्रमणिको विदेशमा मृत्यु, ६ दिनपछि गाउँमै दहासंस्कार
September 05, 2021 12:36 PM
प्रदेश १ मा कोरोना नियन्त्रण हुदै, तिन जिल्लामा संक्रमित दर शुन्य
September 05, 2021 12:02 PM
झापामा निषेधाज्ञा झन् खुकुलो
September 05, 2021 10:23 AM